PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - UBASHIYE BEFUNA IMPINDA
UBASHIYE BEFUNA IMPINDA
Ilanga - 2018-02-12 - Izindaba - JOHN HLONGWA hlongwaj@ilanganews.co.za
BABHEME bakholwa abantu abebethamele umculo ka-Asanda Mqiki emcimbini obuseThe Chairman, eThekwini, ngempelasonto. Izinsimbi bezishaywa bukhona kuchwaze abantu njengoba bekudlala ibhendi yakhe.
Abathandi bomculo wakhe, obekukhona nezinye izinhlanga phakathi kwabo, babonakale benelisekile njengoba bebeze bacule kanye naye.
Udlale isikhathi esingangehora kodwa abantu bebesacela impinda. Phakathi kwabantu ebebekhona bezozijabulisa singabala uNkk Sibhidla-Saphetha, obengungqongqoshe emnyangweni wezamasiko namaciko, noDiva Cadach oke waba ngumsakazi kwiGagasi FM.
Lo mcimbi ubungomunye wemijikelezo asazoba nayo u-Asanda kuleli lizwe naseMozambique.
Useke wasebenzisana nabaculi okubalwa kubo uSibongile Khumalo, iFreshlyground, uKhaya Mahlangu noBongeziwe Mabandla. Muva nje usanda kuqopha bukhoma i-album yakhe entsha esihloko sithi, “Nobakithi” ezobe isitholakala ezitolo ngoMbasa (April).
Ekhuluma nge- album yakhe ukuthi kungani kumthathe isikhathi eside ukuyiqopha yize eseke wasebenza nezinkakha kwezomculo uthe: “Sengike ngacula namabhendi amaningi kodwa isizathu okuyiso wukuthi bengingakasitholi isi- tayela somculo engifisa ukugxila kusona. Ngeke ngithi namanje sengisitholile ngenxa yokuthi sengizibandakanye nezinhlobo eziningi zomculo.
“Engingakusho nje wukuthi indlela engikuyo njengamanje ingithokozisa kakhulu. Sengikulungele ukuzwisa abantu ubumtoti bephimbo lami kule album nalo mjikelezo engikuwo,” kusho yena.
Uthi mabalindele i- jazz ejabulisayo futhi ethinta inhliziyo.
UKHAYA noNtando Mthethwa besemcimbini wezithandani obuhlelwe yibandla i-Oasis.
I-DISTRUCTION Boyz yethule amaciko asayine ngaphansi kwenkampani yayo, iDistruction Boyz Records.
UBASHIYE befisa impinda u-Asanda Mqiki ecula bukhoma.